नियम र शर्तें - Wight को Calbourne पानी मिल आइल
तपाईँले ब्राउज र यो वेबसाइट तपाईं पालन गर्न र निम्न नियम र प्रयोग को अवस्था बाँधिएका हुन सहमत छन् प्रयोग गर्न भने, संग जो सँगै हाम्रो गोपनीयता नीति यो वेबसाइट को सम्बन्ध मा तपाईं संग Calbourne जल मिल सम्बन्ध शासन.
अवधि “Calbourne जल मिल” वा “हामीलाई” वा “हामी” जसको दर्ता कार्यालय Calbourne जल मिल छ वेबसाइटको मालिक बुझाउँछ, Newport रोड, Calbourne, Wight को Isle, PO30 4JN. हाम्रो कम्पनी दर्ता नम्बर छ 00717762 र दर्ता भू हप्ता ठाउँमा & छोराहरू लिमिटेड सी / ओ रोलर मिल्स, Calbourne जल मिल, Westover, Calbourne, Newport, Wight को Isle, PO30 4JN. अवधि “तपाईं” हाम्रो वेबसाइट को प्रयोगकर्ता वा दर्शक बुझाउँछ.
यो वेबसाइट प्रयोग प्रयोग निम्न सर्तहरू विषय हो:
यो वेबसाइट को पृष्ठ को सामग्री आफ्नो सामान्य जानकारी र प्रयोग मात्र छ. यो सूचना बिना परिवर्तन गर्न विषय हो.
न त हामी न त कुनै पनि तेस्रो दल सत्यता गर्न कुनै पनि ग्यारेन्टी वा ग्यारेन्टी प्रदान, Timeliness, प्रदर्शन, पूर्णता वा कुनै खास उद्देश्यका लागि फेला परेन वा यो वेबसाइटमा प्रस्ताव जानकारी र सामाग्री को उपयुक्ततामाथि. तपाईं यस्तो जानकारी सामाग्री inaccuracies वा त्रुटिहरू समावेश हुन सक्छ भनी स्वीकार र हामी expressly कुनै पनि inaccuracies वा fullest हदसम्म त्रुटिहरू कानून द्वारा अनुमति लागि दायित्व बहिष्कार.
यो वेबसाइट कुनै पनि जानकारी वा सामाग्री प्रयोग तपाईँको आफ्नै जोखिममा सम्पूर्ण छ, जसको लागि हामी उत्तरदायी हुन हुँदैन. यसलाई कुनै पनि उत्पादन सुनिश्चित आफ्नै जिम्मेवारी हुनेछ, यो वेबसाइट मार्फत सेवा वा जानकारी उपलब्ध आफ्नो विशिष्ट आवश्यकताहरू पूरा.
यो वेबसाइट स्वामित्वमा वा लाइसेन्स छ जो हाम्रो सामाग्री समावेश. यो सामाग्री समावेश, तर सीमित छैन, डिजाइन, लेआउट, हेर्न, उपस्थिति र ग्राफिक्स. प्रजनन अनुसार प्रतिलिपि अधिकार सूचना संग भन्दा अन्य निषेधित छ, जो यी नियम र सर्तहरू को भाग खेल्छ.
सबै व्यापार चिह्न यो वेबसाइट मा पुनरुत्पादन हो जो सम्पत्ति छैन, वा लाइसेन्स, अपरेटर वेबसाइटमा स्वीकार गर्दै.
यो वेबसाइट को अनधिकृत प्रयोग क्षतिहरूको लागि दावी गर्न वृद्धि दिन र / वा एक आपराधिक ठेस हुन सक्छ.
समय समयमा यो वेबसाइट पनि अन्य वेबसाइटहरु लिंक समावेश हुन सक्छ. यी लिङ्क थप जानकारी प्रदान गर्न आफ्नो सुविधाको लागि प्रदान गरिन्छ. तिनीहरूले हामी वेबसाइट समर्थन गर्ने इङ्गित छैन(को). हामी लिङ्क गरिएको वेबसाइट को सामाग्री को लागि कुनै जिम्मेवारी(को).
तपाईं Calbourne जल मिल गरेको पूर्व लिखित सहमति बिना अर्को वेबसाइट वा कागजात यो वेबसाइट लिंक सिर्जना गर्न सक्छ.
डार्क चकलेट 750g संग Porridge जई £4.50
रकी रोड Muesli 600g £4.95
हँसमुख चेरी Muesli 3kg £22.75
सेल्फ राइजिंग आटा १ किलोग्राम £3.95